天天色影视综合网全文免费阅读 天天色影视综合网 E道阅读网,欧美老妇怡视频全文免费阅读 欧美老妇怡视频 E道阅读网
nyraki-pahalalana malalaka azon’ny tsirairay ovaina
lahatsoratra93 535 amin’ny teny malagasy
Nyfitenymalagasydiatenim-pirenen'ny Repoblikan'i Madagasikara. Ny teny malagasy dia ao amin'ny fianankavian-tenin'ny teny barito (ao amin'ny teny aostronezianina). Any Banjarmasin, nosin'i Kalimantan(Indonezia) no foiben'ny fiteny barito. Ny teny akaikikaikin'ny teny malagasy ankehitriny dia ny fiteny maaniany. Misy koa ny fiteny samihima sy ny fiteny dosona deiaha sns. Ny fiteny malay izao no teny miasa eo amin'io nosy io. Araka ny antontanisan'ny Akademia malagasy dia ny 83,61% dia tsy miteny afatsy ny teny malagasy.
Nyfanandroana malagasy dia endriky ny fanandroana ataon'ny mpanandro malagasy izay andinihany sy ampiharany ny fifandraisan'ny fotoana ahaterahan'ny olona iray na ny fotoana ahatanterahan'ny zavatra iray andaniny, amin'ny toerana sy ny toetran'ireo zavatra eny amin'ny lanitra, indrindra ny Volana, ankilany, araka ny tetiandro nentin-drazana malagasy sy ny fifandraisan'izany amin'ny ho toetr'ilay olona teraka na ilay zavatra miseho na tiana hotanteraka. Izany fifandraisana izany no atao hoe vintana. Ambaran'ny mpanandro malagasy fa mamaritra ny toetra sy ny hoavin'ny olona ateraka na ny zavatra tanterahina tandrify azy ny vintana nefa azo ovana izany amin'ny alalan'ny fanalana vintana na fanalana faditra raha ratsy ka atahorana hitera-doza io vintan-dratsy io. Tsy ny vintana mifandray amin'ny Volana sy ny kintana ihany anefa no voakasiky ny fanandroana malagasy fa ny vanim-potoana rehetra hatramin'ny andro ao amin'ny herinandro sy ny fizaràn'ny andro, ka hatramin'ny fizaran-taona sy ny taona koa. Manampy izany ny lafintany (atsimo, avaratra, atsinanana sns) sy ny zavatra hafa toy ny tany, ny rivotra, ny afo ary ny rano sns. Tsy ny volana sy ny andro ihany no manan-danja eo amin'ny fanandroana malagasy fa ny fizarazaran'ny andro koa, toy ny maraina sy ny tolakandro, ny andro sy ny alina, ny miposaka masoandro sy ny mitatao vovonana sy ny milentika masoandro sns. Noho izany dia tsy ny fotoana ihany no sahanin'ny fanandroana malagasy fa ny erana na ny habaka koa.
Mitranga amin'izao fotoana izao :Ny valanaretin'ny coronavirus eto Madagasikara ary eran'izao tontolo izao, Brexit[ovaina]
Nahafaty olona mihoatra ny iray hetsy ny valanaretina coronavirus izay nipoitra tany Wuhan(Sina) ka niparitaka erak'izao tontolo izao.
Fankalazana ny fahaleovantena any Haiti (1804) ary any Boroney(1984)
1983 – Fanovana ny protokoly fifandraisana amin'ny tambajotran'i ARPANEThoTCP/IP izay fotoana nihatombohan'ny Aterineto araky ny fahafantarantsika ankehitriny.
天天色影视综合网全文免费阅读 天天色影视综合网 E道阅读网,欧美老妇怡视频全文免费阅读 欧美老妇怡视频 E道阅读网Raki-bolana malalaka
天天色影视综合网全文免费阅读 天天色影视综合网 E道阅读网,欧美老妇怡视频全文免费阅读 欧美老妇怡视频 E道阅读网 Wikifamakiam-boky
Wikiversite天天色影视综合网全文免费阅读 天天色影视综合网 E道阅读网,欧美老妇怡视频全文免费阅读 欧美老妇怡视频 E道阅读网
Folo lehibe indrindra :anglisy—alemana—frantsay—nerlandey —天天色影视综合网全文免费阅读 天天色影视综合网 E道阅读网,欧美老妇怡视频全文免费阅读 欧美老妇怡视频 E道阅读网italiana—malagasy—espaniola—rosy—japoney—portogey
Amin'ny fiteny afrikana : Afar —Afrikaans —Akan — አማርኛ —Bamanankan —Chi-Chewa — chiTumbuka —Fulfude —Gĩkũyũ — Hausa / هَوُسَ —Igbo —isiXhosa —isiZulu — Kanuri — Kinyarwanda —Kirundi — Kiswahili —Kongo — Kuanyama — Lingala — Luganda —Malagasy